किन चलेन च्यासल ? – Rajdhani Daily
किन चलेन च्यासल ?
काठमाडौं । च्यासल युथ क्लबले कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सोमबार नेपाल एपीएफ क्बलसँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ । दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा च्यासलले केही मुभलाई गोलमा परिणत गर्न नसक्दा एफीएफसँग अंक बाड्न बाध्य भएको हो । लिग इतिहासमा १ सय गोल पूरा गरेका सन्तोष साहुखलले केही अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् ।
सन्तोषले जारी लिगमा अहिलेसम्म ५ गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ता रहेका छन् । तर, उनको क्लबले भने लक्ष्य अनुसारको जित आत्मसाथ गर्न सकेको छैन ।
लिग च्याम्पियनको सपना बुन्दै राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई समावेश गरेको च्यासल अंक तालिकाको १०औं स्थानमा रहेको छ । ललितपुर क्लब थ्री स्टार भने ६ खेलबाट चौथो स्थानमा छ । स्टार खेलाडी सेवासुविधा हुँदासमेत क्लबले सोचेजस्तो प्रदर्शन गर्न नसकेपछि क्बल व्यवस्थापन अहिले कमजोरी विश्लेषणमा लागेको छ । आखिर किन चलेन च्यासल ? च्यासलले अघिल्लो लिगमा पनि राम्रा खेलाडी समावेश गरेको थियो । यसपटक उसले अझ उत्कृष्ट पदर्शन गर्ने योजनाका साथ मैदानमा उत्रिएको हो । तर, मैदानमा सोचेजस्तो च्यासलका खेलाडी चल्न सकेनन् ।
क्लब निर्माणमा व्यवस्थापनले कुनै कन्चुस्याइँ गरेको देखिँदैन । स्थानीय समुदायको पनि उसलाई समर्थन छ । तर, रिजल्ट निस्केको छैन । सोमबार एपीएफसँग पनि रोकिएपछि च्यासल थप दबाबमा परेको हो । एपीएफसँग जितेको भए च्यासल अंक तालिकाको छैटौं स्थानमा उक्लने थियो ।
अहिलेसम्म उसले खेलेको ६ खेलमा १ मा जित, ३ मा बराबरी र २ खेलमा हार बेहोरेको छ । च्यासल लिग अंक तालिकामा ६ अंकका साथ १०औं स्थानमा छ । एपीएफ ५ अंकका साथ
११औं स्थानमा रहेको छ । उसले खेलेको ६ खेलमध्ये १ मा जित, २ मा बराबरी र ३ खेलमा हार भोगेको छ ।
सोमबार नै भएको अर्को खेलमा भने एनआरटीले नेपाल पुलिस क्लबलाई १–० ले हरायो । एनआरटीका लागि दर्शन गुरुङले निर्णायक गोल गरेका थिए । एनआरटीले ८ अंकका साथ छौटौं स्थानमा छ ।
उसले ३ मा जित, १ मा बराबरी र २ मा हार बेहोरेको छ । अघिल्लो लिगको अंक तालिकका पुछारमा रहेका कारण उसले प्राप्त गरेका अंकबाट २ अंक भने घटाइएको छ । पुलिस आठ अंकका साथ सातौं स्थानमा छ । पुलिसले २ जित, २ हार र २ खेलमा बराबरी खेलेको छ । अंक तालिकाको शीर्षस्थानमा १३ अंकका साथ मच्छिन्द्र क्लब रहेको छ ।
Tags: किन चलेन च्यासल ?
मनाङ थ्री स्टार बराबर
काठमाडौं। घरेलु फुटबलका दुई महारथी रुस्लान थ्री स्टार क्लब र मनाङ–मस्र्याङ्की क्लबबीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ । उपाधि दाबेदार मनाङ र थ्री स्टारले कतार एयरवेज शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा २–२ गोलको बरा...
एपीएफ र आर्मीको सहज जित
काठमाडौं । विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब राजधानीमा जारी पाँचौं संस्करणको अरबीबी एनभीए राष्ट्रिय क्लब महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा विजयी भएका छन् । त्रिपुरेश्वस्थित राष्ट...
स्थानीय तहका कर्मचारीको अनिश्चित भविष्य (9,843)
उपसचिव बढुवाविरुद्ध सरकारकै अधिकृत सर्वोच्चमा, १ सय… (9,418)
चीनसँगको नाकामा नेपालको पहिलो बीओपी : सेनाको… (3,815)